Vavolombeloni Jehovah eto Madagasikara
Institut Pasteur eto Madagasikara
Saikanosin i Malezia
Marilou Diaz-Abaya dia talen-koronantsary, mpanoratra mizaka ny zom-pireneni Filipina teraka ny 30 Martsa 1955 tao Filipina ary maty ny 8 Oktobra 2012
Ny fanafihana 13 Novambra 2015 tao nosy Frantsa dia nitranga ny harivanny Zoma, ka nahitana tifitra variraraka izay nitranga tao Paris, tao aminny fahafolo sy ny faharaika ambinny folo distrika, ary ny fipoahana tao Saint-Denis kianjani Frantsa. ...
Ny kaominina dia fizaram-paritra any Frantsa. Ny kaominina matetika dia tanàna. Ny velarantaniny dia mety miovaova araka ny toerana misy azy manerana ani Frantsa afatsy i Wallis-et-Futuna ary zanatany tsy misy olona mipetraka, izany hoe 50% ny is ...
Ny fivavahana ao Gabôna dia anjakan ny kristianisma, indrindra ny katôlisisma. Ny 75 %n ny Gabôney dia Kristiana fa ny 11 % kosa manaraka ny fivavahan-drazana animista ary ny 10 % Miozolmana. Miantraika amin ny fivavahana kristiana sy silamo ao G ...
Manakaiky ny 79 %n ny mponina ao Gabôna no kristiana ka ny 53 % amin izany dia manaraka ny Katôlisisma ary ny sisa dia mitsinjara amin ny Prôtestanta sy ny firehana hafa. Ny katôlisisma dia niorina tao Gabôna niaraka tamin ny fanjanahan-tany pôrt ...
Vitsy ny Miozolmana ao Gabôna, izay eo amin ny 10 %n ny mponina, izay manaraka ny firehana sonita. Niova finoana ho amin ny fiavavahana silamo ny filoham-pirenena Bongo tamin ny taona 1973 sady nanampy anarana silamo Omar ny anarany ka nahatonga ...
Ny Bateke na Teke dia Banto ao Afrika Afovoany izay monina any avaratra sy afovoany amin ny Repoblikan i Kôngô, nefa hita koa any andrefana amin ny Repoblika Demôkratikan i Kôngô, ary ahitana azy ireo vitsy koa ny ao amin ny tapany atsimo-atsinan ...
I Omar Bongo na Omar Bongo Ondimba na El Hadj Omar Bongo Ondimba dia mpitondra fanjakana gabôney, teraka tamin ny 30 Desambra 1935 tao Lewaï ary maty tamin ny 8 Jona 2009 tany Barcelona. Filoham-pirenen i Gabôna izy nandritra ny 42 taona nanombok ...
I Pierre Savorgnan de Brazza dia mpahita tany frantsay sady mpandaharaha amin ny asam-panjakana tamin ny fanjahan-tany taty Afrika, tantsambo manam-boninahitra, izay nitety an i Afrika Afovoany, nanorina an i Kôngô frantsay sady nahita koa an i G ...
Ny fiteny ao amin ny Repoblikan i Kôngô dia ahitana fitenin ny tompon-tany sy ny fiteny frantsay. Ny fiteny frantsay no fiteny ôfisialin’ ny Repoblikan’ i Kôngô. Ny mponina tsirairay dia miteny amin’ ny fitenin’ ny vondrom-poko misy azy. Ny lalam ...
Mamadou Aliou Kéïta dia mpilalao baolina kitra mizaka ny zom-pireneni Ginea teraka ny 1 Janoary 1952 tao Ginea ary maty ny 11 Aprily 2004 tao Conakry
Misiona Evanjelika Teratany eto Madag ..